I-Lar da Vieira: ichibi lokubhukuda, i-jacuzzi, i-WIFI, ingadi - I-Airbnb
I-Lar da Vieira: ichibi lokubhukuda, i-jacuzzi, i-WIFI, ingadi
Tomiño, Pontevedra, Galicia, i-Spain
Indlu yakhiwa ngo-2007 futhi yakhuthazwa yizigodlo zendabuko zaseGalician "Pazos".
I-La da Vieira yakhelwe ukukunikeza konke ukunethezeka kwekhaya.
Ilungele izimpelaviki noma amasonto wonke, ungajabulela ihlobo elithulile nelipholile e-Galicia kanye nesihlabathi esimhlophe esihle esihle samabhishi aso.
Ngalinye lamakamelo alo likhipha intelezi ebabazekayo, kusukela ekuphekeni isidlo sakusihlwa esimnandi ekhishini kuya ekuphumuleni ngaphansi kwezinkanyezi kuvulandi ongaphambili. Ichibi lokubhukuda litholakala kusukela ngo-Ephreli kuya kuSepthemba 2021.
Amandla: kufika kubantu abayi-11.
Amakamelo: Amakamelo okulala angu-4 (elilodwa eliphansi), igumbi lokuphumula, ikhishi, igalaji, amagumbi okugeza angu-3 anethawula elishisayo (elilodwa elakhiwe ekamelweni elikhulu, elinye elineJacuzzi labantu ababili).
Amamitha: indlu engu-190 sqm kanye ne-700 sqm yengadi enezihlahla zokuhlobisa nezihlahla zezithelo (iwolintshi, ihalananda, imephu yaseJapane ebomvu, imephu yaseJapane encane, i-sweetgum, i-liriodendro, ...).
Imibhede: Igumbi elilodwa elinemibhede emibili, ikamelo elilodwa elinemibhede emibili kanye nombhede ogoqwayo, igumbi elilodwa elinemibhede emibili nombhede olala phansi kanye negumbi elilodwa elinemibhede emibili (150 x 190 cm).
I-Crib: iyatholakala uma uyicela.
Izinsiza: Ichibi langasese elingu-8x4 m, ukushisisa okuphakathi, i-vacuum emaphakathi, ukufakwa komculo, isisitho selanga sikagesi kuvulandi.
Indawo yomlilo: ukusebenzisa ubusuku obupholile noma nje endaweni ezungezile nakuba indlu inokushisa okumaphakathi okunamandla.
Izisetshenziswa: Ikhishi elihlome ngokuphelele: i-cutlery, izitsha, i-kitchenware, ilineni, i-toaster, i-blender, i-coffee maker, umshini wokuwasha, ifriji, i-oven, i-microwave, i-ayina kanye ne-ironing board. Ilineni lombhede, amathawula, okomisa izinwele, imidlalo yebhodi, izincwadi, isitiriyo, i-TV, iDVD.
Isevisi yokuhlanza: iyatholakala uma uyicela.
Lala da Vieira
U-Barrio Vilar, (INOMBOLO YOFONI EFIhliwe) - Tomiño
U-María no-Manuel batholakala amahora angu-24 ukuze benze indawo yokuhlala emnandi e-Lar da Vieira. Ungasishayela kokuthi +(INOMBOLO YOFONI EFIHLIWE) noma +(INOMBOLO YOFONI IFIhliwe) nganoma yisiphi isikhathi sosuku.
Inombolo yepholisi: VUT-PO-000115
Hlola ezinye izinketho ezise- Tomiño, Pontevedra namaphethelo